Shuruudaha Adeegsiga - Jesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
Ku soo dhawow www.China-Flag-Makers.com. Waxaan u siineynaa degelkeena adeeg macaamiisheena ah. Fadlan si taxaddar leh u akhri Shuruudaha iyo Shuruudaha. Shuruudahaan iyo Shuruudahaan ayaa xukumaya helitaankaaga iyo isticmaalkaaga www.China-Flag-Makers.com.
Marnaba kama dhigi doonno cinwaankaaga e-mailkaaga iyo macluumaadka kale ee gaarka loo leeyahay inay heli karaan shirkad ama hay'ad kale oo aan oggolaansho lagaa haysan. Haddii aad na siiso cinwaankaaga boostada, waxaad heli kartaa joornaallo xilliyeedyo wata macluumaad ku saabsan alaabooyinka iyo adeegyada cusub ama dhacdooyinka soo socda. Haddii aadan rabin inaad hesho waraaqaha noocan oo kale ah, fadlan nala soo socodsii adoo noo soo diraya emayl, soo waca ama noogu soo qor sales@china-flag-makers.com.
Haddii aad ogaato in amarkaaga aan loo dirin cinwaankaaga loogu talagalay, fadlan nala soo xiriir oo macaamiishayada adeegga macaamiisha waxay la xiriiri doonaan shirkadda saadka 24H gudaheeda oo dib ugu dir meeshii loogu talagalay. Si kastaba ha noqotee, Shiinaha-Calanka-Sameeyayaashu waxay ballanqaadayaan inay dib u cusbooneysiiyaan shaqada daabacaadda oo ay u diraan cinwaankaaga loogu talagalay haddii waqtigeenna falcelintu ka badan yahay 24H, oo lacag la'aan ah
Shiinaha-Calan-sameeyeyaasha waxay ka kooban yihiin sawiro, sawirro, sawirro, qaabab dukumiinti, farshaxanno, qoraallo, astaamo, qalabyada softiweer, iyo macluumaad kale (oo halkan loogu magac daray "Tusmada") Boggan iyo Dhammaan Waxyaabaha ku jira waa xuquuqda lahaanshaha ee Shiinaha-Calan-sameeyeyaal. Dhammaan xuquuqda ku jirta Boggan iyo waxa ku jira ayaa ku jira adduunka oo dhan. Waxaa si adag loo mamnuucay in la haysto nuqul, loo qaybiyo, la daabaco, ama la isticmaalo qayb ka mid ah Mawduuca marka laga reebo sida si cad loogu oggol yahay Shuruudaha iyo Xaaladahan. Shiinaha-Calan-Sameeyayaashu waxay xaq u leeyihiin inay ku daraan, tirtiraan, ama wax ka beddelaan qayb ka mid ah Mawduuca wakhti kasta iyadoon ogeysiis hore la siinin.
Adoo galaya ama isticmaalaya www.China-Flag-Makers.com waxaad ogolaatay in lagugu xidho dhammaan Shuruudaha iyo Xaaladaha iyo tilmaamo kasta oo dheeri ah, xaddidaadyo, ama sharciyo la soo dhejin karo oo la xidhiidha qaybo gaar ah ama adeegyo degelkan ah. Shiinaha-Calan-Sameeyayaashu waxay xaq u leeyihiin inay isbeddel ku sameeyaan Boggan iyo Shuruudahaan iyo Shuruudahaas wakhti kasta iyadoon ogeysiis hore la helin. Adeegsigaada joogtada ah ee Boggan waxaa loo qaadan doonaa inuu yahay heshiiskaaga oo lagu xirayo wax ka beddelid ama wax ka beddel ama cusbooneysiin noocaas ah.
Waxaad sidoo kale ogolaatay inaan ku siin karno dhammaan isgaarsiinta sharciga iyo ogeysiisyada si elektaroonig ah adoo ku dhejinaya www.China-Flag-Makers.com ama, doorashadeena, adoo u diraya emayl cinwaanka e-maylka ee aad na siisay markii aad iska diiwaangelisay degelkeenna. Waad ka noqon kartaa ogolaanshahaaga si aad uga hesho isgaarsiinta elektaroonig ahaan adoo email noogu soo diraya sales@china-flag-makers.com. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka noqoto oggolaanshahaaga si aad u hesho isgaarsiintayada si elektaroonig ah, waa inaad joojisaa isticmaalka koontadaada oo ah www.China-Flag-Makers.com.